यि हुन् सगरमाथाको चुचुरो जस्तो पवित्र स्थाममा हस्तमैथुन गरेर नेपाल र नेपालीको अपमान गर्ने व्यक्ति, कारवाहीको माग ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : आइतबार, जेठ १२, २०७६१०:३७ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, सगरमाथा, विश्वकै अग्लो चुचुरो एक आस्थाको केन्द्र पनि हो । निकै पवित्र मानिने यस स्थानमा पुगेर एकजना अमेरिकन नागरिकले ठुलै दुस्साहस गरेका छन् ।
उनको सगरमाथाको चुचुरोमा बसेर हस्तमैथुन गरेर रेकर्ड कायम गर्ने यस्तो दुष्प्रयासको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । अमेरिकाको भर्जिन आइल्यान्डका यि ३६ बर्षीय युवकले यस्तो कार्य गरेर नेपाल र नेपालीको अपमान गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमा ह्युज ए रेक्सहनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा हस्तमैथुन गरिरहेको तस्विर राखिएको छ । करिम शाह निजारीले ट्वीटमा तस्वीर राख्दै भनेका छन्, ‘ आज सगरमाथासँगका सबै कीर्तिमानहरू तोडिँदै गर्दा हामीले पहिलोपटक पृथ्वीको सबैभन्दा उच्च शिखरमा हस्तमैथुन गरेको देखेको छौँ । भर्जिन आइल्यान्डका ३६ वर्षीय ह्युज ए रेक्सहनले स्थानीय समयअनुसार ११ः११ बजे बिहान १ सय २० दर्शकहरूको उपस्थितिमा यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । ‘
हाल यस विषयमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर हस्तमैथुन गर्ने अनुमति कसले र किन दियो भनेर सरकारको पनि आलोचना भैरहेको छ । सगरमाथाको चुचुरोमा हस्तमैथुन गर्ने अमेरिकन नागरिक उनीसँगै रहेका साथीहरूलाई सक्मजिक संजालमा कारवाहीको माग गरिएको छ ।
भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति राखिएको नेपालको आस्थाको केन्द्र सगरमाथाको चुचुरो जस्तो पवित्र स्थानमा उट्पट्याङ गर्नेहरूलाई छुट दिन नहुने माग उठेको छ ।
सगरमाथाको चुचुरोमा हस्तमैथुन गर्दै गरेको तस्वीर खिचाएका आमेरिकन नागरिकको यस्तो कार्यले पौने तीन करोड नेपालीहरूको चित्त दुखेको छ ।
सामाजिक संजालमा उक्त अमेरिकन नागरिक विरुद्ध निकै आलोचना भैरहेको छ ।
पाँचथर हत्याकाण्डको केही घण्टा नबित्दै सोही स्थानमा अर्को एक घटना !
भर्खरै काभ्रेकाे पनौतीमा प्रहरीको गाडी दुर्घटना